जापान मा १ Best सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय! ईडो-टोकियो, समुराई, गिब्ली संग्रहालय ... - Best of Japan
टोकियो राष्ट्रिय संग्रहालय टोक्यो, जापान = शटरस्टक
जापानमा विभिन्न प्रकारका संग्रहालयहरू छन्। त्यहाँ केही पूरा गर्ने संग्रहालयहरू जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, इ England्ग्ल्यान्डहरू छन्, तर जापानी संग्रहालयहरू धेरै प्रकारका छन्। यस पृष्ठमा, म १ 14 संग्रहालयहरूको परिचय दिनेछु।
ईडो-टोक्यो संग्रहालय (टोक्यो)
टोकियो राष्ट्रिय संग्रहालय (टोक्यो)
Ghili संग्रहालय Mitaka (टोक्यो)
शानिओकोहामा रामेन संग्रहालय (कानगावा प्रान्त)
Hakone खुला एयर संग्रहालय (कानगावा प्रान्त)
टोयोटा स्मारक उद्योग र टेक्नोलोजी संग्रहालय (आईचि प्रान्त)
समकालीन कला का २१ औं शताब्दी संग्रहालय, कनाजावा (इशिकावा प्रान्त)
ओहरा संग्रहालय कला (Okayama प्रान्त)
आडाची संग्रहालय कला (Shimane प्रान्त)
हिरोशिमा पीस मेमोरियल संग्रहालय (हिरोशिमा प्रान्त)
बेनेसे आर्ट साइट नौसिमा (कागवा र ओकायामा प्रान्त)
ओत्सुका संग्रहालय कला (टोकुशिमा प्रान्त)
नागासाकी आणविक बम संग्रहालय (नागासाकी प्रान्त)
"ईडो-टोक्यो संग्रहालय" को भवन। यो "इडो र टोकियोको इतिहास र संस्कृति बताउने संग्रहालय" को रूपमा खोलियो। भवनमा उच्च फ्लोर प्रकार = शटरस्टकको अनौंठो आकार छ
ईडो टोक्यो संग्रहालय, टोक्यो = शटरस्टकमा पारंपरिक जापानी स्टेज शोका जीवन आकारका पुतलीहरू
यदि तपाइँ साधारण जापानी मानिसहरु को बारे मा तपाईको समझलाई गहन बनाउन चाहानुहुन्छ, म सबैभन्दा बढी सिफारिस गर्ने संग्रहालय हो - इडो-टोकियो संग्रहालय। यस संग्रहालयमा तपाईले इडो युग (१ 1603०1868-१-XNUMX) देखि अहिलेको युगसम्म साधारण जापानी व्यक्तिको जीवनको बारेमा ठोस प्रदर्शनहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
ईदो-टोक्यो संग्रहालय पूर्वी टोकियोको JR Ryogoku स्टेशन अगाडि छ। अर्को, त्यहाँ कोकुगीकन छ जुन भव्य सुमो कुश्तीको स्थल हो, र यदि तपाईं भाग्यशाली हुनुहुन्छ भने तपाईंले सुमो पहलवानहरू देख्न सक्नुहुन्छ।
यो संग्रहालय एक सात-मंजिला प्रबलित क concrete्क्रीट भवन हो जसको उपस्थिति धेरै विशाल र अद्वितीय छ, जुन माथिको चित्रमा देख्न सकिन्छ। स you्ग्रहालयमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै तपाईको अगाडि विशाल काठको पुल भएको देखेर तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ। यो पुल "Nihonbashi ब्रिज" को एक प्रजनन हो जुन टोकियोको मध्यमा इडो अवधिमा थियो। तपाईं पुल पार गर्नुभयो र ईदो अवधि को दुनिया मा प्रवेश।
यस संग्रहालयमा प्रवेश गर्नु अघि तपाईंले जापानी ईतिहासको बारेमा तयारी गर्नु आवश्यक पर्दैन। यस संग्रहालयमा धेरै चाखलाग्दो प्रदर्शनहरू छन्, जस्तै इडो अवधिमा विशाल व्यापारी घरको विशाल मोडेल। इडो युगमा सामान्य व्यक्तिको घर पनि पुन: उत्पादन र प्रदर्शन गरिएको छ। तपाईं सबै मार्गमा हिंड्दै, त्यहाँ एक कुना पनि छ जुन दशकौं अघि जापानी परिवारहरूको पुन: उत्पादन गर्दछ। यदि तपाईंले यी असंख्य प्रदर्शनहरू हेर्नुभयो भने, तपाईंले सम्भवतः जापानको बारेमा आफ्नो समझलाई गहिरो पार्नुहुनेछ।
इडो-टोक्यो संग्रहालय प्राथमिक र कनिष्ठ हाई स्कूलका विद्यार्थीहरूले पनि आनन्द लिन सक्दछन्।
>> ईडो-टोक्यो संग्रहालयको विवरणको लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्
टोकियो राष्ट्रिय संग्रहालय टोकियो, जापान मा। देशहरूको शटरस्टकमा राष्ट्रिय खजाना र महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक वस्तुहरूको सब भन्दा ठूलो संग्रह घरहरू
टोकियो राष्ट्रिय संग्रहालय जापानको सबैभन्दा ठूलो संग्रहालय हो, जेआर यूनो स्टेशनबाट १० मिनेट जति पैदल। त्यहाँ करिब १२०,००० संग्रहहरू छन्, जसमध्ये 10० वटा राष्ट्रिय खजाना छन्, करीव 120,000० महत्वपूर्ण सांस्कृतिक सम्पत्ति हुन्। यो संग्रहालयमा जम्मा गरिएको वस्तुहरूको संख्या पनि छ। प्रत्येक बर्ष लगभग २ लाख मानिस यस संग्रहालयको भ्रमण गर्छन्।
टोकियो राष्ट्रिय संग्रहालय धेरै ठूला भवनहरु संग शामिल। माथिको चित्रमा देखाइएको केन्द्रीय भवन "होन्कान (मुख्य भवन)" हो। यहाँ, जापानी चित्रहरु, मूर्तिकलाहरु, शिल्पहरु र लेखन प्रदर्शित छन्। विशेष प्रदर्शन प्रायः होनकानमा गरिन्छ। यदि तपाईंलाई कला वा इतिहास मनपर्दछ भने, तपाईं यो भवन मार्फत जान आधा दिन भन्दा बढी लिन सक्दछ।
थप रूपमा, त्यहाँ टोकियो राष्ट्रिय संग्रहालयमा निम्न भवनहरू छन्।
टोयोकन (ओरिएन्टल हाउस): यस भवनमा चीन, कोरिया, दक्षिणपूर्व एशिया, भारत र इजिप्ट जस्ता कला वस्तुहरू प्रदर्शनीमा छन्।
Heiseikan (Heisei को नयाँ भवन): यहाँ, प्राचीन जापानी उत्खनन र यस्तै अन्य प्रदर्शन गरीन्छ। Heiseikan मा, विशेष प्रदर्शनीहरु पनि अक्सर आयोजित गरिन्छ।
होरयूजी कोषागारहरूको ग्यालरी: Buddha औं शताब्दीतिर होरियोजी मन्दिरको बुद्ध मूर्ति र चित्रहरू प्रदर्शन गरिएको थियो। होरियु-जी धेरै पुरानो मन्दिर हो जुन नारा प्रान्तमा अवस्थित छ र यो युनेस्को विश्व सम्पदा स्थलको रूपमा दर्ता छ। यहाँ प्रदर्शित बुद्धको मूर्ति जापानको सब भन्दा पुरानो हो र धेरै प्रभावशाली।
टोकियो राष्ट्रिय संग्रहालयका सबै प्रदर्शनहरू प्रथम श्रेणीका वस्तुहरू हुन् जसले जापानलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यहाँ धेरै प्रदर्शनहरू छन्, यदि तपाईंसँग प्रशस्त समय छैन भने, तपाईं आफूले देखेको कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्छ।
टोकियोको युनो पार्क टोकियो राष्ट्रिय संग्रहालय संग धेरै धेरै अद्भुत संग्रहालय छ। उदाहरण को लागी, पश्चिमी कला को राष्ट्रीय संग्रहालय, प्रकृति र विज्ञान को राष्ट्रीय संग्रहालय, टोकियो महानगर कला संग्रहालय।
>> टोक्यो राष्ट्रिय संग्रहालयको विवरणहरूको लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्
समुराई संग्रहालय हाल एक सानो संग्रहालय हो जुन टोक्योको शिन्जुकुको डाउनटाउन क्षेत्रमा हालसालै बनाइएको थियो। समुराई संग्रहालयको साधारण संग्रहालयहरु भन्दा एकदम फरक अवधारणा छ। यस स muse्ग्रहालयमा केवल प्रदर्शनी कुनाहरू मात्र छैनन् तर ती कुनाहरू पनि छन् जहाँ आगन्तुकहरूले सामुराइको हेलमेट र कवच लगाउन सक्दछन् तस्वीरहरू लिनका लागि। यस संग्रहालयमा, जापानी तरवारको प्रयोग प्रदर्शन पनि देखाइदैछ। त्यसैले यो संग्रहालय विदेशबाट पर्यटकहरु बीच धेरै लोकप्रिय छ।
सामुराई संग्रहालयको लागि, मैले निम्न लेखमा पहिल्यै परिचय दिएकी छु। यदि तपाइँ आपत्ति मान्नुहुन्न भने, कृपया तलको लेख हेर्नुहोस्।
हालसालै समुराई र निन्जाको अनुभव लिन सक्ने विभिन्न सुविधाहरूले जापानमा आउने विदेशी पर्यटकहरूको बीचमा लोकप्रियता लिएका छन्। जापानमा समुराई युगको स्टुडियो शुटि drama्ग नाटक, इत्यादिले समुराईको दैनिक प्रदर्शन गर्दछ। Iga र Koka जस्ता स्थानहरूमा जहाँ धेरै निन्जा अवस्थित थिए, हतियारहरू वास्तवमा द्वारा प्रयोग ...
गिब्ली संग्रहालय एक ठाउँ हो जसले जापानी एनिमेसन स्टुडियो गिब्ली, बच्चाहरू, टेक्नोलोजी र कला र एनिमेसन टेक्निकलाई समर्पित फाइनरेटहरूको कार्य देखाउँदछ = शटरस्टक
गिब्ली संग्रहालय मिताका एक संग्रहालय हो जसले जापानी एनिमेसन स्टुडियो "स्टुडियो गिब्ली" को दुनिया परिचय गराउँदछ।
स्टूडियो गिब्ली यसको एनिमेसन कार्यहरूको लागि विश्व प्रसिद्ध छ कि "माई नेबर टोटोरो" "एरिएटिटीको रहस्य संसार" "ह्वाइटको हर्सप" "स्काई इन द स्काई" "राजकुमारी मोनोनोक" "हाउलको मोभिंग क्यासल"।
गिब्ली संग्रहालय मिताकामा तपाई प्रक्रियाको बारेमा सिक्न सक्नुहुन्छ जुन यी टुक्रा बनाइएको थियो। यस संग्रहालयमा, तपाई यी कार्यहरूमा देखा पर्ने धेरै पात्रहरूलाई पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। उदाहरण को लागी, यो संग्रहालय प्रवेश गर्दा, Totoro को ठूलो गुड़िया जो "मेरो नेबर टोटोरो" मा देखा पर्दछ तपाईंलाई स्वागत गर्दछ। हलमा, बच्चाहरू क्याटबसमा प्रवेश गर्न सक्छन् जुन "मेरो नेबर टोटोरो" मा देखा पर्‍यो।
यो संग्रहालय टोकियोको पश्चिमी भागको मिताका शहरमा अवस्थित छ। यो जेआर Mitaka स्टेशन बाट पैदल मा लगभग १ minutes मिनेट र बस बाट लगभग minutes मिनेट लाग्छ।
गिब्ली संग्रहालय मिताकाभित्र छिर्नका लागि तपाईले अग्रिम आरक्षण गर्नु पर्छ। यो संग्रहालय धेरै लोकप्रिय छ, त्यसैले त्यहाँ एक जोखिम छ कि तपाईं पहिले आरक्षण गर्न सक्नुहुन्न। त्यसो भए, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाई जापान जानुहुन्छ भन्दा पहिले इन्टरनेट मार्फत बुक गर्नुहोस्।
>> विवरणका लागि कृपया गिब्ली संग्रहालय मिताकाको आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्
Shinyokohama रामेन संग्रहालय (कानगावा प्रिफेक्चर)
शानिओकोहामा राउमेन संग्रहालयमा भीडहरू। प्रदर्शन १: १ टोकियोको ऐतिहासिक शितमाची जिल्लाको प्रतिकृति हो र यसले क्षेत्रीय रामेन रेस्टुरेन्टहरू = शटरस्टक प्रस्ताव गर्दछ
Shinyokohama रामेन संग्रहालय एक अद्वितीय संग्रहालय हो जहाँ जापान को ramen दुकानें प्रतिनिधि भेला। यदि तपाईं यो संग्रहालयमा जानुभयो भने, तपाईं एकै समयमा जापान भर प्रसिद्ध रमेन खान सक्नुहुनेछ। यस सum्ग्रहालयका अधिकांश पसलहरूले रामेनको सानो मात्रा पनि प्रदान गर्दछ, त्यसैले हुनसक्छ तपाईं विभिन्न प्रकारका चाउचालहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
Shinyokohama रामेन संग्रहालय टोकियोको दक्षिण, Kanaagawa प्रान्त, योकोहामा शहर मा JR Shinkansen Shin-Yokohama स्टेशन बाट minute मिनेट पैदल अवस्थित छ।
भुईं फ्लोरमा प्रवेश द्वारबाट संग्रहालय प्रवेश गर्दा, तपाईं बेसमेन्ट फ्लोरमा निर्देशित हुनुहुन्छ। तपाईंले माथिको तस्वीरमा देख्न सक्नुहुन्छ, १ 1958 10 जापान पुनरुत्पादित गरियो, जब निसिन फूडको चिकन रामेन (तत्काल चाउचाल) जारी गरियो। त्यहाँ करीव १० स्वादिष्ट रामेन पसलहरू छन्। त्यस समयमा रेट्रो पसलहरू पनि बेसमेंट फ्लोरमा कतारबद्ध छन्, त्यसैले कृपया स्ट्रोलको पनि आनन्द लिनुहोस्।
Shinyokohama रामेन संग्रहालय मा ramen पसल बिस्तारै बदलिन्छ। यस स famous्ग्रहालयमा रामेन्स शप कति प्रसिद्ध छ, यदि त्यसले थोरै प्रयास गरे पनि प्रतिष्ठा खराब हुनेछ र तिनीहरू संग्रहालय छोड्न बाध्य हुनेछन्। म साक्षात्कार कभर गर्न धेरै पटक संग्रहालय गए। मैले सुनेको कि संग्रहालयका कर्मचारीहरू सँधै स्वादिष्ट रामेको खोजीमा देशव्यापी यात्रा गर्छन्। तिनीहरूको उत्कटताका लागि, म प्रशंसा गर्दछु।
जापानमा, यस संग्रहालय जस्तै, त्यहाँ खाद्य थिम पार्कहरू लोकप्रिय चाउचाउ पसलहरू जम्मा गर्दै छन्। उदाहरण को लागी, त्यहाँ टोकियो स्टेशन उत्तरी निकास, क्योटो स्टेशन भवन, सप्पोरो स्टेशनको अगाडि भवन आदि छन्। जब तपाईं जापान मा यात्रा गर्नुहुन्छ, कृपया त्यस्ता फूड थिम पार्क हेर्नुहोस्।
>> Shinyokohama रामेन संग्रहालय को विवरणको लागि, कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
Hakone खुला एयर संग्रहालय (कानगावा प्रिफेक्चर)
उहाँ हाकोने ओपन-एयर संग्रहालय वा हाकोने चोकोकु नो मोरी बिजुत्सुकन लोकप्रिय संग्रहालय हो जुन आउटडोर मूर्तिकला पार्क र केही इन्डोर प्रदर्शन हाकोने, जापान = शटरस्टकमा रहेको छ।
हाकोने ओपन-एयर संग्रहालय (हाकोन चोकोकु-मोरी संग्रहालय) हाकोनेमा अवस्थित छ जुन टोकियोको १०० किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा हिमाली क्षेत्र हो। Hakone जापान मा एक प्रतिनिधि स्पा रिसोर्ट हो।
यस स muse्ग्रहालयको लगभग ,70,000०,००० वर्ग मिटर साइटमा हेनरी मूर र रोडिन जस्ता धेरै मूर्तिकलाहरू छन्। धेरै मूर्तिकलाहरू खुला हावामा प्रदर्शनमा छन्, त्यसैले तपाईं हकोनेको सुन्दर पहाडहरू हेर्दा मूर्तिकलाहरूको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। त्यहाँ "पिकासो पवेलियन" पनि छ जसले पिकासोको चित्रहरू र त्यस्तै परिसरमा जम्मा गर्दछ।
हाकोन खुला एयर संग्रहालय भ्रमण गर्ने व्यक्तिहरूको सन्तुष्टि स्तर धेरै नै छ। यहाँ पर्याप्त वास्तविक कला कार्यहरू छन्।
थप रूपमा, बच्चाहरूले पनि यो संग्रहालयमा रमाउन सक्छन्। यस संग्रहालयको बाहिरी प्लाजामा तीन-आयामिक कलाकृतिहरू छन् जसमा बच्चाहरू प्रवेश गर्न र खेल्न सक्छन्। मेरा बच्चाहरू रमाए जब हामी यो संग्रहालयमा गयौं।
थप रूपमा, Hakone खुला एयर संग्रहालयमा "Ashi-yu" को सुविधा छ। आशी-यू तातो वसन्त सुविधा हो जहाँ तपाईं आफ्नो खुट्टा (ashi) तात्न सक्नुहुन्छ। किन तपाईं आफ्नो खुट्टा तातो स्प्रि inमा भिजाउनुहुन्छ र सुन्दर पहाडहरूमा हेर्नुहुन्न?
>> Hakone खुला एयर संग्रहालय को विवरणको लागि, कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
टोयोटा स्मारक संग्रहालय उद्योग र टेक्नोलोजी (आईची) प्रिफेक्चर)
उद्योग र टेक्नोलोजी वा टोयोटा संग्रहालयको स्मारक संग्रहालयमा पुरानो क्लासिक पुरानो कार मोडेलहरू। विगतदेखि भविष्यमा शटरस्टकमा कार उत्पादन टेक्नोलोजी देखाउँदै
टोयोटा मोडेल र उत्पादन प्रणालीहरूको प्रदर्शन। नागोया, जापानको शटरस्टकमा उद्योग र प्रविधि को स्मारक संग्रहालयमा लिइयो
यदि तपाइँ जापानी उद्योगको बारेमा जान्न चाहानुहुन्छ, त्यहाँ टोयोटा स्मारक संग्रहालय उद्योग र टेक्नोलोजी जत्तिकै कुनै संग्रहालय छैन। यस संग्रहालयमा आएका विदेशी पर्यटकहरूको सन्तुष्टि स्तर धेरै नै छ।
टोयोटा स्मारक संग्रहालय उद्योग र टेक्नोलोजी टोयोटा समूह द्वारा संचालित संग्रहालय हो जुन नागोया शहर, आइची प्रान्त, केन्द्रीय होन्शुमा अवस्थित छ। यो संग्रहालयको कूल फ्लोर स्पेस करिब २ meters,००० वर्ग मिटर छ। टोयोटा द्वारा विकसित धेरै स्पिनि machines मेशिनहरू, अटोमोबाइलहरू, रोबोटहरू, आदि अहिलेसम्म प्रदर्शन गरिएको छ।
यस संग्रहालयमा, तपाइँलाई थाहा छ कि टोयोटाले कारको उत्पादन सुरु गर्नु अघि स्पिनि machines मेशिनको उत्पादनमा यसको स्केल विस्तार गरेको छ। कारको प्रदर्शनी हलमा, तपाईं दुर्लभ क्लासिक कारदेखि भविष्यका कारहरू सम्म धेरै कारहरूले अभिभूत हुन सक्नुहुन्छ।
अटोमोबाइल विकासको इतिहास र अटोमोबाईल उत्पादनको रूपरेखामा टिप्पणी र प्रदर्शनहरू पनि पर्याप्त छन्। यो संग्रहालयको सबै प्रदर्शनहरू हेर्न सम्पूर्ण दिन लाग्छ।
>> अधिक जानकारीको लागि कृपया टोयोटा स्मारक संग्रहालयको उद्योग र टेक्नोलोजीको आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्
२१ औं शताब्दीको कान्जावाको समकालीन कला संग्रहालयमा पर्यटकहरू मध्ये सबैभन्दा आश्चर्यजनक कला कामहरू एक अप्टिकल भ्रम Leandro Erlich को पौंडी पोखरी = शटरस्टक
२१ औं सताब्दी स Muse्ग्रहालय समकालीन कला, कानाजावा कान्जावा शहरको मध्य भागमा रहेको समकालीन कला संग्रहालय हो, मध्य होन्शुको जापान सागर छेउमा अवस्थित एक सुन्दर पारम्परिक शहर। यो संग्रहालय अब जापानको सबैभन्दा ऊर्जावान कला संग्रहालयहरु मध्ये एक हो।
यो स muse्ग्रहालयको भवन पूर्ण गिलासको साथ धेरै खुला संरचना हो। भवनमा अनौंठो समकालीन कलाको व्यवस्था गरिएको छ। उदाहरण को लागी, तपाईं माथिको चित्रमा देखिए जस्तै "पोखरी" देख्नुहुन्छ। त्यहाँ पुलमा धेरै व्यक्ति छन् र तपाईंलाई हेर्दै। यदि तपाईं भवनको तहखाने ठाउँमा जानुहुन्छ भने, यस पटक तपाईं आफ्नो घरबाट माथिल्लो व्यक्तिलाई हेर्नुहुनेछ जहाँ मोटो शीशा छानामा झुण्डिएको थियो।
यस संग्रहालयमा, एक पछि अर्को अभिनव विचारहरूको साथ विशेष प्रदर्शनीहरू राखिन्छन्। त्यहाँ धेरै रोचक प्रोजेक्टहरू पनि छन् जस्तै कार्यक्रमहरू जहाँ साधारण नागरिकहरूले कला कार्य उत्पादनमा भाग लिन सक्दछन्। मैले यो संग्रहालयमा एक प्रसिद्ध कलाकार द्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा पनि भाग लिएँ। त्यस समयमा, कला उत्पादनमा भाग लिने व्यक्तिको रमाईलो छाप प्रभावमा पर्‍यो। यदि तपाईंलाई कला मनपर्दछ भने, म तपाईंलाई यो संग्रहालयमा जान सिफारिस गर्दछु। तपाईं रमणीय सम्झना सिर्जना गर्न सक्षम हुनु पर्छ।
>> विवरणका लागि कृपया २१ औं शताब्दी स Muse्ग्रहालयको समकालीन कला कानाजावाको आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्
ओहरा संग्रहालय कला (Okayama प्रिफेक्चर)
ओहरा संग्रहालय कला (बीकान ऐतिहासिक क्वार्टर) = एडोबस्टक
ओहरा संग्रहालय कला जापान मा एक धेरै सम्मानित संग्रहालयहरु मध्ये एक हो। ओहरा संग्रहालय अफ आर्ट जापानको पहिलो निजी पश्चिमी कला संग्रहालय हो जुन १ 1930 in० मा स्थापना भएको हो। यस संग्रहालयले सक्रिय रूपमा पश्चिमी चित्रकला र एल ग्रीको, गौगुइन, मोनेट, मटिसी, रोडिन इत्यादि जस्ता खरिद गरेको छ जब थोरै मात्र थिए। जापानमा प्रसिद्ध पश्चिमी कला टुक्रा, र यसलाई जनतामा खोलियो। त्यहाँ धेरै सांस्कृतिक मानिस छन् जो यस सum्ग्रहालयको प्रदर्शनहरू हेरिरहेका थिए। यस संग्रहालयले कला संस्कृति को मामला मा जवान व्यक्ति को शिक्षा मा एक ठूलो योगदान गरेको छ।
ओहरा संग्रहालय को कला Kurashiki शहर, Okayama प्रान्त, पश्चिमी होन्शु मा स्थित छ। Kurashiki यसको सुन्दर ऐतिहासिक शहर दृश्यको लागि प्रसिद्ध छ, र धेरै पर्यटक भ्रमण। ओहरा संग्रहालयको कला यस ऐतिहासिक शहर दृश्यको केन्द्रमा छ।
रोडिन, रेनोइर र मोनेट जस्ता मास्टरपिसहरू यस सum्ग्रहालयको मुख्य भवनमा प्रदर्शित हुन्छन्। एनेक्समा जहाँ इडो अवधिको गोदाम मर्मत गरिएको थियो, त्यहाँ जापानी प्रिन्टमेकरहरू र एशियामा एन्टिक कला छन्। यस स muse्ग्रहालयको पोखरीमा, पानी लिलीहरू वसन्तदेखि गर्मी सम्म फूल्छन्। यो पानी लिली फ्रान्सको गिर्वेनीमा मोनेटको जापानी बगैंचाबाट विभाजित छ।
यस संग्रहालयको संस्थापक मागोसाबुरो ओहारा (१1880०-१-1943)) थियो, २० औं शताब्दीको उत्तरार्धमा एक अग्रणी जापानी व्यापारी। उनले एक पश्चिमी चित्रकार तोराजिरो कोजिमा (१ 20१ - १ 1881 २)) धेरै पटक युरोप पठाए र तोराजीरोलाई कलाका कामहरू छान्न आग्रह गरे। रणनीतिहरू जुन व्यवसायका व्यक्तिहरू र कला विज्ञहरूले एक साथ संग्रहालय सुधार गर्छन् अझै पछ्याइरहेका छन्। यस संग्रहालयका निर्देशक र क्युरेटरहरू जापान प्रतिनिधित्व गर्ने पेशेवरहरू हुन्। तिनीहरूलाई मागोसाबुरोको सन्तानबाट सहयोगको लागि आग्रह गरिएको छ र यस संग्रहालयमा आधारित जापानी कला संसारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। उनीहरूले युवा कलाकारहरूको रचनाहरू पनि राम्ररी अध्ययन गरेका छन् र युवाहरूलाई समर्थन गरिरहेका छन्।
म अहिले सम्म कभरेजको उद्देश्यका लागि धेरै संग्रहालयहरूमा गएँ। तीमध्ये म ओहारा म्यूजियम आर्टको मान्छेबाट धेरै प्रभावित भएँ। मलाई लाग्छ कि यदि तपाईं यो संग्रहालयमा जानुहुन्छ भने, तपाईं कलाबाट मात्र कलाको रक्षा गर्ने व्यक्तिको कथाले प्रभावित हुनुहुनेछ।
>> कलाको ओहरा संग्रहालयको विवरणहरूको लागि, कृपया आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्
आडाची संग्रहालय कला (Shimane) प्रिफेक्चर)
अडाची संग्रहालय को जापानी बगैचा = Takamex / Shutterstock
आडाची संग्रहालय हालै यसको बगैचाको लागि प्रसिद्ध छ। अमेरिकी बगैंचाले बगैंचालाई जापानको सब भन्दा अद्भुत जापानी बगैंचाको रूपमा मूल्या .्कन गरेको छ, र अधिक व्यक्ति यो बगैचा हेर्न जान्छन्। मैले धेरै पटक यो स muse्ग्रहालय कभर गरिरहेको छु, मलाई थाहा छ कि यो बगैचा अद्भुत छ। मैले निम्न लेखमा अडाची संग्रहालयको बगैचा परिचय गरेको छु, त्यसैले यदि तपाइँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने कृपया तलको लेख पनि पढ्नुहोस्। जे होस्, अडाची संग्रहालय कला वास्तवमा एक चित्रकला कला संग्रहालय हो। यो संग्रहालयसँग एकदमै राम्रो जापानी पेन्टि painको संग्रह छ। यदि तपाईं अडाची आर्ट संग्रहालय जानुहुन्छ भने, कृपया बाहिरी बगैंचा मात्र नभई इनडोर जापानी चित्रहरू पनि हेर्नुहोस्।
आडाची संग्रहालयको जापानी बगैंचाको लागि कृपया निम्न लेखलाई सन्दर्भित गर्नुहोस्।
जापानी बगैंचाहरु युके र फ्रान्सेली बगैंचाहरु भन्दा बिभिन्न छन्। यस पृष्ठमा, म जापानमा प्रतिनिधि बगैचा परिचय गर्न चाहन्छु। जब तपाईं विदेशी पर्यटन भ्रमण गाइड पुस्तकहरूमा हेर्नुहुन्छ, आडाची संग्रहालय कला अक्सर एक सुन्दर जापानी बगैचाको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। अवश्य पनि अडाची संग्रहालय आश्चर्यजनक रूपमा सुन्दर छ ...
आडाची संग्रहालय अफ आर्ट द्वारा आयोजित जापानी चित्रहरूको सबैभन्दा प्रसिद्ध ताइकन योकोयामा (१ 1868-१1958 XNUMX) को काम हो। उदाहरण को लागी, "निस्वार्थता", "शरद पात", "एक नुहाउने पछि" आदि। ताइकान एक जापानी चित्रकार हुन् जसले आधुनिक जापानको प्रतिनिधित्व गर्दछ। उनले माउन्ट फुजीको तस्विर राम्ररी रंगे। माउन्टको उसको तस्वीर हेर्दै फुजी, तपाईं जापानीहरूले यस पहाडमा महसुस गरेको आध्यात्मिकता कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ।
अन्य कलाकारहरू जस्तै Seiho TAKEUCHI, Shoen UEMURA, Gyokudo KAWAI इत्यादि पनि यस संग्रहालयमा छन्। माटोको काम जस्तै रोजनजिन KITAOJI र कांजिरो KAWAI पनि अद्भुत छ। यदि तपाईं अडाची आर्ट संग्रहालय जानुहुन्छ, तपाईं जापानी पेंटि ofको संसारको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
>> आडाची संग्रहालय को विवरणको लागि, कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
हिरोशिमा पीस मेमोरियल संग्रहालय (हिरोशिमा) प्रिफेक्चर)
जापानमा हिरोशिमा पीस मेमोरियल संग्रहालय निलो आकाश = शटरस्टकको साथ
निम्न दुई भिडियोहरूमा ए-बम बचेका चित्रहरू छन्।
हिरोशिमा पीस मेमोरियल संग्रहालय हिरोशिमा प्रान्त, हीरोशिमा शहर स्थित हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्कमा स्थित संग्रहालय हो। यो संग्रहालय अगस्त August, १6.1945 मा खस्किएको परमाणु बमले गर्दा भएको दुर्घटनाको सम्झनालाई भावी पुस्ताहरूमा हस्तान्तरण गर्न स्थापना भएको हो।
यस संग्रहालयमा, हिरोशिमा नागरिकहरूको जीवन आणविक बम खसाउनु अघि प्रस्तुत गरिएको थियो। र आणविक बम खसालदा हिरोशिमामा कस्तो दुर्घटना भएको थियो भन्ने कुरा विशाल अवशेषको प्रदर्शनीमा वर्णन गरिएको छ।
हिरोशिमा पीस मेमोरियल संग्रहालय अन्य संग्रहालयहरू भन्दा बिलकुलै फरक छ। यस संग्रहालयको भ्रमण गर्ने व्यक्तिहरू आणविक बमको डरदेखि एकदमै डराउँछन् र धेरै स्तब्ध छन्। र तिनीहरूले महसुस गर्छन् शान्ति कति महत्त्वपूर्ण छ।
जापान भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकहरू माझ अवलोकन गर्नका लागि यस सum्ग्रहालयलाई शीर्ष पर्यटकीय आकर्षण मध्ये एकको रूपमा उच्च मानिन्छ। संग्रहालयको छेउमा कंकाल गुम्बज भवन पनि छ जुन अझै एटम बम खस्दा मनाउन खडा छ। तपाई किन हाइपोसेन्टरमा शान्तिको बारेमा सोच्नुहुन्न जहाँ आणविक बम खसालियो?
>> हिरोशिमा पीस मेमोरियल संग्रहालयको विवरणहरूको लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
नाओशिमामा अवस्थित Yayoi Kusama द्वारा विशाल कद्दू वस्तुहरू। नाओशिमा प्रसिद्ध टापु हो कि त्यहाँ धेरै कला = शटरस्टक छ
नाओशिमा एक प्रसिद्ध टापु हो कि त्यहाँ धेरै कला छ, जापान = शटरस्टक
"बेनेसी आर्ट साइट नओशिमा" कागावा प्रान्तको नौसिमा र टेशिमा टापुहरूमा र ओकायामा प्रान्तको इनुजीमा टापुमा सबै कला सम्बन्धित गतिविधिहरूको लागि सामूहिक नाम हो। यी गतिविधिहरू व्यवस्थित वा बेनेस होल्डिंगहरू, Inc. र Fukutake फाउन्डेशन द्वारा समर्थित हो। बेनेसी ओकायामा-शिमा आधारित शिक्षा र प्रकाशनसँग सम्बन्धित जापानी कम्पनी हो।
ईमान्दार हुन गाह्रो छ कि यी कला गतिविधिहरू बुझ्न को लागी सजिलैसँग बुझाउनु। यी कला गतिविधिहरू सेतो ईन्ल्यान्ड सागरको सुन्दर टापुहरूमा स्थिर र विविध रूपले विकसित हुन्छन्। यदि तपाईं यी टापुहरूमा जानुभयो भने, तपाईंले महसुस गर्नुहुनेछ कि यो क्षेत्र अब जापानको सबैभन्दा रचनात्मक ठाउँ हो। नाओशिमा, तोशिमा र इन्जुमा विदेशबाट आउने विदेशी पर्यटकहरूको बीचमा अधिक लोकप्रिय हुँदैछन्।
यो कला गतिविधि को बारे मा 30० बर्षको ईतिहास छ। हाल, यस क्षेत्रमा चिचु कला संग्रहालय, बेनेसी हाउस संग्रहालय, ली उफान संग्रहालय, एन्डो म्यूजियम, टेशिमा कला संग्रहालय जस्ता संग्रहालयहरू छन्। र त्यहाँ टापुहरूको गाउँ र मैदानको वरिपरि धेरै कला सुविधाहरू र कला कार्यहरू छन्। तिनीहरूले पुरानो गाउँ र सेतो इनल्यान्ड सागरको सुन्दर दृश्यको साथ एक रहस्यमय सद्भाव सिर्जना गर्दछ।
यी टापुहरूमा ईन्टरहरू छन्। जे होस्, म तपाईंलाई बेनेसी हाउस संग्रहालयमा रहन सिफारिस गर्दछु। यो संग्रहालयको पनि होटेलको स्वामित्व छ। यस सुन्दर होटेलमा बसिरहँदा, तपाईं कलाले घेरिन सक्नुहुन्छ।
चिचु कला संग्रहालयको लागि अग्रिम आरक्षण आवश्यक छ। बेनेसी आर्ट साइट नाओशिमा सम्बन्धी थप जानकारीको लागि, बेनेसे हाउस संग्रहालयमा बुकिंग र चिचु कला संग्रहालयको लागि बुकिंग सहित, कृपया तल आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्।
>> बेनेस आर्ट साइट नौसिमा
यस क्षेत्रमा, "सेतोची ट्राइनेले" नामको समकालीन कलाको महोत्सव प्रत्येक तीन बर्षमा एक पटक आयोजित गरिन्छ। यस चाडको बखत, यो धेरै पर्यटकहरूको भीड हो।
>> सेतौची ट्रीएनालेको बारेमा अधिक जानकारीको लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
ओट्सुका संग्रहालय आर्ट (टोकुशिमा) प्रिफेक्चर)
ओत्सुका संग्रहालय आर्ट एक विशाल संग्रहालय हो जुन फ्लोर क्षेत्र २०, meters१२ वर्ग मिटर नारुटो शहर, टोकुशिमा प्रान्त, शिकोकामा रहेको छ। यो संग्रहालयसँग कलाको प्रमुख कार्यहरूको पूर्ण आकारको सिरेमिक प्रजननको ठूलो मात्रा छ।
विश्वव्यापी २ countries देशहरूमा १ 1000 ० कला स muse्ग्रहालयहरूद्वारा आयोजित १००० भन्दा बढी पश्चिमी चित्रकलाहरू नक्कल गरिन्छन् र मौलिक जस्तो आकारमा प्रदर्शित हुन्छन्। यदि तपाईं यो संग्रहालयमा जानुभयो भने तपाईंले विश्व प्रसिद्ध पश्चिमी कला पाउनुहुनेछ। उदाहरण को लागी, तपाइँ लियोनार्डो दा भिन्सी, रेम्ब्रान्ड, Velazquez, Goya, Millet, Renoir, Gogh, Cezanne, Gaughin, Picasso जस्ता चित्रकारहरु को मास्टरपीस को सराहना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं प्रसिद्ध चित्रहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै सिस्टिन चैपल, स्क्रोभेनी चैपल।
ओत्सुका संग्रहालय अफ आर्ट १ 1998 2000 in मा ओट्सुका फार्मास्यूटिकल कं, लिमिटेड द्वारा स्थापित गरिएको थियो, एक प्रमुख जापानी औषधि कम्पनी, आफ्नै प्रतिकृति टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर। यस संग्रहालयको नक्कल तस्बिरले २००० बर्ष भन्दा बढि रंगलाई अमान्य बनाउँदैन। त्यसकारण, यो भन्न सकिन्छ कि यो एक महत्वपूर्ण कला संग्रहालय हो भविष्यका पुस्ताहरूमा मास्टरपीसहरूको रेकर्ड छोड्न।
जब म पहिलो पल्ट कलाको ओत्सुका संग्रहालय गएँ, म जे भए पनि अचम्ममा परें। यहाँ पूर्ण आकार मा संसार को धेरै मास्टरपीसहरु छन्। यद्यपि मलाई थाहा छ तिनीहरू नक्कलहरू हुन्, म तिनीहरूको शक्तिले अभिभूत थिएँ।
ओत्सुका म्यूजियम आर्ट एकदम ठूलो छ र तपाईले सबै चित्रहरू हेर्न कम्तिमा km किमी यात्रा गर्नुपर्दछ। त्यसो भए, यदि सम्भव छ भने कमसेकम एक दिन लिन प्रयास गर्नुहोस्। यो अग्रिममा हेर्न चाहानु भएको मास्टरपिसहरू चयन गर्न राम्रो विचार हुन सक्छ।
>> कलाको ओत्सुका संग्रहालयको विवरणहरूको लागि, कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
नागासाकी आणविक बम संग्रहालय (नागासाकी प्रिफेक्चर)
नागासाकी आणविक बम संग्रहालय नागासाकी, जापान = शटरस्टक
नागासाकी पीस पार्कमा नागासाकी शान्ति स्मारकको दृश्य। नागासाकी प्रान्तको = शटरस्टकको मूर्तिकार Seibou Kitamura द्वारा बनाइएको मूर्ति
नागासाकी आणविक बम संग्रहालय क्युशुको पश्चिमी भागमा नागासाकी प्रान्तको नागासाकी शहरको जेआर नागासाकी स्टेशनको २ किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित छ। यो संग्रहालय अगस्त 2, १9.1945 मा नागासाकी शहरमा खसेको आणविक बमले गर्दा भएको विनाशलाई रेकर्ड गर्नको लागि स्थापना गरिएको थियो। हीरोशिमा शहरको हिरोशिमा पीस मेमोरियल संग्रहालयको साथसाथै यो जापानको विशेष संग्रहालयको रूपमा पनि मानिन्छ। हिरोशिमा पीस मेमोरियल संग्रहालय जस्तै नागासाकी आणविक बम संग्रहालयमा विदेशबाट पनि धेरै आगन्तुकहरू आएका छन्।
आणविक बमबारीले नष्ट गरेको नागासाकी शहरका विभिन्न अवशेषहरू यस फोटोग्राफहरूको साथ यस सum्ग्रहालयमा प्रदर्शित हुन्छन्। उदाहरण को लागी, त्यहाँ परमाणु बम खस्दा ११:०२ मा देखाइएको समयक्षेत्रहरू छन्, र इस्पात झुकावहरू जुन गम्भीररूपमा मुडेका थिए। नागासाकीमा परमाणु बमको मोडेल पनि छ। तपाईं अंग्रेजी उपशीर्षकहरूको साथ आणविक हतियारहरूमा विभिन्न सामग्री छविहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।
नागासाकी आणविक बम संग्रहालय नजिक, माथी फोटो मा देखिए अनुसार शान्ति को इच्छा को विषयवस्तु मा त्यहाँ एक शान्ति प्रतिमा छ। यदि तपाईं यस मूर्तिको अगाडि उभिनुभयो भने, तपाईं शान्तिको बारेमा गम्भीर भई सोच्न सक्नुहुन्छ।
>> नागासाकी आणविक बम संग्रहालयको विवरणको लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्